Indawo yokutyela | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Yitya usele » Izimuncumuncu kunye neepizzerias » Ngaphandle kweIrestyu
I-Kungen Restaurang ikumbindi weHultsfred phakathi kwesicwangciso sikaTor kunye neKöpingsparken. Irestyu yaseKing ibonelela ngee-pizza, iiburger, iintlanzi kunye neetshiphusi kunye nesaladi. Into eyahlukileyo kukuba unokukhetha iisosi ezine ezahlukeneyo kuzo zonke izitya. I-garlic sauce, i-kebab sauce, i-béarnaise kunye ne-sauce eqinile.
NgoMvulo: 11–22NgoLwesibini: 11-22NgoLwesithathu: 11-22NgoLwesine: 11-22NgoLwesihlanu: 11-23NgoMgqibelo: 11-23NgeCawa: 11-22
I-Oskarsgatan 28, 577 30 IHultfred, Sverige
4.5 ngaphandle kwe-5.0
1/5 kwinyanga ephelileyo
Akukho nto ndinokuyincoma, sithathe ii-fries kunye neefrench kwaye yayilelona livumba laziwayo kwinyama. Ifama kunye namaqanda anukayo, phantse isalfure. Umva wenyama uhlala emlonyeni ixesha elide, wawungcamla ngokungathi wawunuka nje. Amafriji amaFrentshi ayelunge kakhulu kungenjalo nesosi yebhere kodwa inyama yayingakwazi ukugcina isisu sam siwela.
3/5 kwinyanga ephelileyo
Yonke into ibinjengoko ubunokulindela i-kebabs, iifry kunye neebhotile kodwa isosi ye-kebab yayiphoxa. Kwakungekho kwaphela ngathi isosi ye-kebab ilapha kule ndawo, kodwa yayinencasa nje egalikhi. Nangona kunjalo, basebenzisa i-ham yokwenyani yokudibanisa.
Umhlobo wam kunye nam sinqwenela ngobubele ipitsa. Sikhethe ukutya eKing. Ndithathe amaxesha onyaka amane. Kwakukho ipitsa elungileyo ngokwenene ene-ham yokwenene kunye namakhowa amatsha. Ibhonasi kunye noKumkani kukuba unokukhetha nayiphi na isosi ngokwakho efrijini. Yomelele, igalikhi, ibea kunye ne-kebab sauce. 🍕👑
Eyona ndawo ilungileyo ye-pizzeria engaphantsi komhlaba icebisa ukuzama le ndawo #LocalGuide